Template si aad u abuurto fx dxf liiska dhibcaha ee Excel - Geofumadas
Juunyo, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Downloads, topografia
Recently dhawaan Juan Manuel Anguita ayaa ii soo gudbiyay version cusub ee codsigan in ka hor waxaynu kor u qaadnay, laakiin wakhtigaan ayaa ka tagay dhibaatooyin qaar ka mid ah version cusub ee Excel.
Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, laakiin shaqeeyn heer sare ah. Waa inaad gashaa lambarka dhibic, isku duwid x, y, z; Waxaan ku dhejiyey iskudhacyada UTM, laakiin waxay noqon kartaa isku duubnaanta degaanka (jaangoynta).
Markaa waxaad ku dari kartaa kood si aad u faahfaahsan u isticmaasho saldhigga oo dhan, taasina waxay ka muuqan doontaa calaamadda. Ugu dambeyntii waxaad ku dari kartaa magaca dameerka meesha lagu kaydin doono.
Waxaa ka mid ah hagaajinta ku jirta nuqulkan oo ah in la abuuro dxf faylka dxf, ka hor intaadan awoodin inaad mishiinka saaran haddii ay jiraan qodobo badan.
Sidoo kale, tirada iskudhafku waxay noqon kartaa 10,000 waana suurtagal in la doorto in faylka la abuuray 2D ama 3D.
Ugu dambeyntii, waxa ugu fiican: Waxaa ku habboon Windows 7 iyo Excel 2007.
Wali ma lahan hordhaca, horey. Hada haddaba badhanka dxf waxaa lagu riixaa farriin muujinaysa halka lagu keydiyo.
Natiijo ahaan, waxaad arki kartaa in lakabka aasaasiga ah (infra) aad leedahay si gaar ah loo abuuray qoodhadhka, cabbirrada, dhibcaha iyo qoraalka. Isla isku midka ah lakabka qaaca (lev).
Waxaan bedelay midabada lakabyada si ay u muuqdaan, lakinse waa iska cad yihiin.
Waxa kale oo suurtagal ah in dhibcooyinka aan la arki karin, laakiin waa inaad u bedesho habka adeegsiga DDPTYPE.
Qalab kale oo suurtogal ah ayaa ah in qaabka loo yaqaan "voices" iyo dhibcaha jajab tobanlayaasha iyo kumanaan kala go'ayaashu waa khalad.
Taas waxaa lagu soo diyaariyay Faylka / doorashooyinka / horumarsan. Halkaa waxaad ku qeexi kartaa "adeegayaasha kala soocida nidaamka" ama u bedelida shuruudo gaar ah.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa faylka v17.1 version. Waxay u baahan tahay qiimo astaan ​​leh Kaarka amaahda ama Paypal.
Maadaama ay tahay faylka Excel oo leh mashiinka ku-meel-gaadhka ah, waxay leedahay xlsm extension, si kastaba ha ahaatee, Excel caadiyan wuu furmaa.
Post Previous«Previous 4 daqiiqado muhiim ah taariikhda Geofumadas
Post Next Buug-tilmaameedka qiimeynta dhadigga magaaladaNext »
15 jawaabahoodii in "Template in la abuuro file DXF liiska Excel dhibcaha"
Xidhiidhka ayaa ku yaal dhammaadka boostada
Carlos Antonio da Silva isagu wuxuu leeyahay:
Sidee buu u yahay inuu u iibsado qorshahan?
Hello Benjamin, waxaan kuu soo diray email aad la xiriir link.
Eeg emailkaaga, waxaa jira xiriirka.
Benjamin fernandez isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan ku bixiyay lacag bixinta, laakiin markii aan ku soo laabtay ganacsade ayaan bogga bogga isku midka ah ku arkay? Sideen u soo dejisan karaa template?
Aqoonsiga gawaarida: xxxxxxxxxx800223W
Ka dib markaad bixiso waxaan ku laabanayaa isla bogga mar labaad iyo dalabka bixinta (?). Sideen u soo dejisan karaa?
ALEXIS isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibka Hello, sidee u bedeli kartaa waddada dxf file? waad ku mahadsantahay
CRISTOBAL isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay, waxay ahayd mid aad waxtar u leh (Y)
Tomas Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Qalab fiican Mahadsanid!
Noocan oo kale ah raaligelin saaxiib g! in aad u beddeli doonaa karaa jidka meesha file la badbaadiyey sidii aan ku sii waddo barnaamijkii bedeli kartaa waddada halkaas oo aad rabto in aad badbaadiyo faylka? .. mahad iyo reply sugaya
Noocan oo kale ah marmarsiinyo saaxiib g! in aad u beddeli doonaa karaa jidka meesha file la badbaadiyey sidii aan ku sii waddo barnaamijkii bedeli kartaa waddada halkaas oo aad rabto in aad badbaadiyo faylka? .. mahad iyo reply sugaya
Saaxiib ayaa mahad leh, waan isku dayi doonaa
Waxtarka aadka u fiican, mahadsanid iyo hambalyo badan dhamaanba guulihii aad gaartay, guusha!
Had iyo jeer waa laguu xusuusinayaa, waxaa jira faylal isku-duuban oo ku yaal juqraafi ah oo aad samaysay oo weli la isticmaalayo.
Dhacdooyinka isagu wuxuu leeyahay:
G!, Saaxiib wanaagsan had iyo jeer ka tago darsaday muhiim ah in dadka u baahan ee fumazón da'ayeen ad had iyo jeer waa ii farxad inaan salaamo oo ay ogaadaan in ay hawshu u sii socoto, hab weyn.